Sein Lyan - စိ န် လျှံ: အမေ နဲ့ သူ၏ စိတ္တဇ
အမေ နဲ့ သူ၏ စိတ္တဇ
ကျနော်ငယ်ငယ် သိတတ်စ ကတည်းက အမေက ကျမ်းမာရေးမကောင်းဘူး။ အထူးသဖြင့် ညီမအငယ်ဆုံးကို မွေးပြီးတော့ ဖြစ်လိုက်တဲ့ ရောဂါတွေက ဆက်တိုက်.. ဆက်တိုက်။ ကျနော့်နဲ့ အငယ်ကောင်ကို မွေးပြီးတဲ့ ချိန်ထိ အမေက မြ၀တီ.. ကော့ကရိတ်.. မော်လမြိုင်..မဲဆောက်တက်ပြီး ဈေးရောင်းဈေးဝယ်(ဟိုတုန်းကအခေါ် မှောင်ခို) လုပ်နေတုန်း။ သွားတယ်။ လာတယ်။ စားတယ်။ သန်မာတယ်။ ကျမ်းမာရေးကောင်းတယ်။ ညီမအငယ်ဆုံးကိုလဲ မွေးပြီးရော အမေ ဖြစ်လိုက်တဲ့ ရောဂါတွေက ၉၆ပါး တရာ့နှစ်ပါး မျိုးစုံပါပဲ။
ညီမကိုဗိုက်ခွဲမွေးတယ်။ ပြီးတော သိပ်မကြာဘူး..့ သားအိမ်ကင်ဆာဖြစ်ပြီး ရန်ကုန်မှာ နှစ်ရှည်လများ ဆေးထိုး ဆေးစား ဓာတ်ကင်နဲ့ ဝေဒနာခံစားရတယ်။ ကင်ဆာ လုံးလုံးရှင်းရှင်းပျောက်လို့ မော်လမြိုင်ပြန်လာတော နောက်ရောဂါ့ စဖြစ်တယ်။ အသည်းရောင် အသားဝါတဲ့…။ အဲဒီကတည်းက အိပ်ယာထဲကနေမထတော့ဘူး။ တနေ့ တနေ့ အမေဘယ်နေ့ ဆုံးမလဲဆိုတာ ကျောင်းကနေပြန်လာတိုင်း ရင်တမမနဲ့ပေါ့။
ငါကျောင်းကနေ ပြန်ရင် ငါ့အိမ်ရှေ့မှာ အိုးသုံးလုံးများ စီရီထားမလဲ။ အိမ်ပေါ် မတက်ခင် အမေ့ကို လာကြည့်တဲ့သူများနေရင် ဒုန်းကနဲ ဆို နှလုံးခုန်ပြီး ငါ့အမေ ဆုံးလို့ လူများတာလားဆိုပြီး အိမ်ကို မပြန်ချင်လောက်အောင် စိတ်မကောင်းဖြစ်ရတယ်။ မှတ်မိသလောက်တော့ ကျနော် ငါးတန်းတက်လို့ ခြောက်တန်း နှစ်ရောက်ပြီးပေါ့။ အဖေက အဲဒီတုန်းက အစိုးရ ၀န်ထမ်း ဆိုတော့ အမေ့ကို တနေကုန် မကြည့်နိုင်ဘူး။ အမေ့ရဲ့ အမေအဖွားကပဲ အမေ့ကို ပြုစုပေါ့။ အမေက အပေါ့အလေးသွား အိပ်ယာထဲမှာပဲ။ အဲဒါကို အိမ်ရောက်ရင် အဖွားနဲ့ အတူ အမေ့ကို အ၀တ်အစား လဲပေးရတယ်။
အဖွားတယောက်တည်းကလဲ အမေ့ကို မ မနိုင်။ အမေ့အသားကို မထိရဘူး။ ထိလိုက် ကိုင်လိုက်ရင် လက်ရာကြီး အတိုင်း နာရီ အတော်ကြာအောင် ကျန်ရစ်နေတာ။ လက်လေးနဲ့ အသားကို ဖိလိုက်ရင် ပြန်မတက်လာတော့ဘူး။ ကျောင်းကပြန်ရောက်ရင် ရေချိုးခန်းထဲ က အမေ့ထမိန် တပုံကိုလျှော်ရင်း အမေနေကောင်းပါစေလို့ မျက်ရည်စမ်းစမ်းနဲ့ ဆုတောင်းရတာအမော။ အဲဒီတုန်းက ကျောင်းတောင် မနေချင်တဲ့ဘ၀။ အမေက တချိန်လုံး ဆေးရုံနဲ့ အိမ်နဲ့..။ ဆေးရုံမှာ နေရတဲ့ရက်က ပိုများသလိုပဲ။ အမေ့မျက်နှာကလဲ မမှတ်မိလောက်အောင် ပြောင်းလဲသွားတယ်။ မျက်နှာ တခုလုံးဝါထိန်ပြီး မျက်တွင်းကဟောက်ပက်။ မျက်လုံးက ပြူးပြီးဝါနေသယောင်။ ဗိုက်ကလဲပူ.ဘာမှာလဲမစားနိုင်။ တမှိုင်မှိုင်နဲ့ အမေ့ကို အစာကျွေးတိုင်း ပါးစပ်ကနေ ပြန်အမ်တာကို ကြည့်ပြီး အစားအသောက်ပျက်ရတယ်။
အဲဒီလို ရှိသမျှစည်းစိမ်တွေပုံအောပြီး သကာလ အမေ့ကုသိုလ်ကံက ကောင်းတော့ အမေ အသည်းရောင် အသားဝါ ပျောက်သွားတယ်။ နဂိုမူလအတိုင်း ကျမ်းမာလာတယ်။ အဲဒီမှာ စရတဲ့ ရောဂါက မန်းနီးကင်ဆာပဲ။ ပိုက်ဆံရှိမှ ဆေးကုလို့ရတယ်။ ပိုက်ဆံမရှိရင် ဘာမှလုပ်လို့ မရဘူး ဆိုပြီး အမေ့ခမျာ စိတ္တဇ ၀င်သွားတယ်။ လက်ထဲမှာ ငွေအလုံအလောက်မရှိတော့ရင် ငါရောဂါမကုနိုင်တော့ဘူး။ ငါသေရတော့မယ်ဆိုပြီး အမြဲညည်းလေ့ရှိတယ်။ အမေညည်းတော့ အဖေရော သားသမီးတွေရော မနေနိုင်ဘူး။ အမေကံကောင်းချက်က တကယ့်ကို ကြင်နာ သနားတတ်တဲ့ ယောကျားကောင်း ရထားလို့ပဲ။
ဆိုက်ပရပ်စ်မှာ နေတုန်းက အမေ့သားအိမ် ကင်ဆာထပ်ဖြစ်တယ် လို့ လက္ခဏာ ပြတော့ အမေစိတ်ဓာတ်တွေ အကြီးအကျယ် ကျတယ်။ အဲအချိန်တုန်းက ဆရာဝန်ကလဲ ဒီမှာ ကုလို့ မပျောက်ဘူး. နိုင်ငံခြားမှာကုမှ ရမယ်လို့ပြောတဲ့ နေ့ကစပြီး အိပ်မပျော် စားမ၀င်. တသသ နဲ့ နိုင်ငံခြားမှာ ကုဖို့ စွဲလန်းနေတာ။ ပြီးတော့ မြန်မာပြည်က ဆရာဝန်ကို ပျောက်အောင် မကုနိုင်ဘူး ဆိုပြီး သွားမပြတော့ပဲ သူ့မှာ ကုဖို့ ပိုက်ဆံအလုံအလောက်မရှိမှာကိုလဲ စိတ်ပူပြီးတော့ အိပ်ယာထဲက နေမထနိုင်တော့ဘူး။ အဲဒါနဲ့ ကိုယ်က မပူနဲ့ အကုန်တာဝန်ယူတယ်. ပျောက်သွားအောင်သာကု လို့ ပြောရတယ်။ အဲဒီအခါမှ သားက ကုပေးမယ်ဆိုတဲ့ အားတွေ ပြန်တက်ပြီး နောက်ဆရာဝန်ဆီပြန်သွား ဆေးပြန်စစ်တော့ အခြေအနေကောင်းတယ်။ဒီမှာကုလို့ရတယ်လို့ပြောလိုက်တော့ အမေခမျာ နေပြန်ကောင်းသွားတယ်။ မြန်မာပြည်မှာကုလဲ တော်တော်ကုန်တာပဲ။ တကယ်လို့များ အမေသာ နိုင်ငံခြားမှာ ကုခဲ့ရရင် ကျနော်လဲ ခုလောက်ဆို အကြွေးပတ်လည်ဝိုင်းနေမှာပဲ။ အမေသိပ်ကံကောင်းတယ်။
နောက်ပိုင်း အမေက ခေါင်းမူးပြီးဆိုရင်လဲ ဆိုက်ကို ၀င်ပြီး ဆေးခန်းပြရမှာ နေသာထိုင်သာ ရှိတဲ့ သူ ဖြစ်သွားတယ်။ ဘာဖြစ်ဖြစ် ဆေးခန်းသွားရမှ. ဆေးသောက်ရမှ။ တခါတလေ ကိုယ်က သူဆေးတွေကို သကြားလုံး ပဲလှော်စားသလိုမျိုး ထမင်းစားပြီးတိုင်း စားစားနေတာ မြင်တော့ အမေရယ် မလိုအပ်ရင် ဆေးခန်းမသွားပါနဲ့ လို့ တားလိုက်ရင် ကိုယ်က ကပ်စည်းနည်းပြီး ပေးမသွားချင် ဖြစ်မှာ စိုးပြီး မတားရဲဘူး။ သူက ကိုယ်က မသွားနဲ့လို့ပြောရင် မသွားပဲနေပေမယ့် သူစိတ်မကောင်း ဖြစ်ဖြစ်နေတာ. ဆေးခန်းမသွားလိုက်ရလို့ စိတ္တဇ တွေ ဖြစ်ပြီး နေမကောင်းပိုဖြစ်တာကို တွေ့ဖူးတယ်။ ဒါနဲ့ နောက်ပိုင်း ဘာမှ မပြောတော့ဘူး။ သူစိတ်ချမ်းသာအောင် ဆေးခန်းပြစေတယ်။ သူလိုအပ်တဲ့ ဆေးဖိုးဝါးခ မပူပါနဲ့ အမေ့သားက ထောက်ပံ့ပါတယ်လို့ ပြောရတယ်။ ခုဆိုရင် အမေက တခုခုဆို ကိုယ့်ကိုပဲ ပြောတော့ အဖေသက်သာသွားတယ်။ အခုဆိုရင် အဖေက အမေ့အတွက် ပင်တိုင် ဆရာဝန် ထားထားရတယ်။ အမေတခုခုဆို ချက်ခြင်း ပို့ရတယ်။ နောက်ကျရင် အမေဖြစ်နေတာထက် ဆေးခန်းမသွားရလို့ ပိုဖြစ်တတ်တယ်။
ပြီးခဲ့တဲ့ နှစ်လတုန်းက အမေဒီကိုလာဖို့ ပြင်ဆင်နေတုန်း မော်လမြိုင်မှာ ဆိုင်ကယ်ပေါ်ကပြုတ်ကျတယ်။ ညီမနောက်ကနေလိုက်စီးပြီး ခေါင်းတွေမူးလို့ လဲကျသွားတာ။ အရှိန်မရှိပေမယ့် အသက်ကြီးတော့ ခေါင်းကွဲသွားတယ်။ အုပ်ဆက် ပွင့်သွားတယ် ဟသွားတယ် ဆိုလားပဲ။ သေချာမသိဘူး။ ဆရာဝန်တွေ စိတ်ပူတာက အမေ ဦးနှောက်က မသိမသာ သွေးယိုမယ်ဆိုတာကိုပဲ။ ဒီလိုနဲ့ ဆေးရုံမှာ တလခွဲလောက် နေလိုက်ရတယ်။ အဲဒီမှာ အမေက စိတ္တဇ ၀င်ပြန်တယ်။ သူ့ကွဲနေတဲ့ ခေါင်းက ဘယ်တော့မှ ပြန်မဆက်ရင် ဟဟ နဲ့ အမြဲနေရမှာပေါ့ဆိုပြီးတော့ စိတ်မကောင်းဖြစ်တယ်။ ဖုန်းခေါ်ရင်ငိုတယ်။ အဲဒါနဲ့ အမေပျောက်အောင်ကု ဟနေတာကို ဆက်အောင်ကု သားတာဝန်ယူတယ် ပြောမှ သူစိတ်ချမ်းသာတယ်။ ဒါပေမယ့် အဲဒီစိတ္တဇက မပျောက်ဘူး အဖေက သူကားနဲ့မပို့ပေးရလို့ သူ့ကိုယ်သူ အပြစ်တင်လို့ မဆုံး။
ပြီးခဲ့တဲ့ အပတ်က စကာင်္ပူက ဆရာဝန်ကြီးတွေ မြန်မာပြည်(ရန်ကုန်)မှာ လူနာအခမဲ့ ကြည့်ပေးတယ် လို့သတင်းကြားတော့ အမေကသွားချင်တယ်တဲ့။ ဒါပေမယ့် ဆရာဝန်တွေက ရောဂါအခြေအနေရ စကာင်္ပူထိ တက်ကု ရမယ်ဆိုရင် ပိုက်ဆံကုန်မှာ သွားကု ရမလား သွားမကု ရဘူးလား ဆိုပြီးဖုန်းဆက်လာတော့ အမေရေ.. သွားပြ.. ပျောက်အောင်ကု.. ဟနေတယ်ထင်တဲ့ ခေါင်းကိုလဲ ဆရာဝန်တွေ အကြံပေးချက်အတိုင်း ကုလို့ ပြောလိုက်တော့ အမေခမျာ ၀မ်းတွေသာပြီး ရန်ကုန်ကို ဆင်းလာပြတယ်။ ကံကောင်းချင်တော့ ဆရာဝန်က စိတ်ပူစရာ မလိုတဲ့ အကြောင်း၊ ခေါင်းကလဲ တဖြည်းဖြည်းနဲ့ ဆက်နေပြီး ဆိုတဲ့အကြောင်း.ဆေးတွေ ဆက်သောက်ဖို့ ၊ အစားအသောက်ဆင်ခြင်ဖို့ ပြောပြီးပြန်လွှတ်လိုက်တယ်။ အမေတယောက် မော်လမြိုင်ကို ပျော်ပြီး ပြန်သွားတယ်။ မပြန်ခင် ဖုန်းဆက်တယ်။ သူ့ခေါင်းက စကာင်္ပူက ဆရာဝန်ကြီးနဲ့ ပြလိုက်မှ ကောင်းသွားပြီးတဲ့.။ ကိုယ်စိတ်ချမ်းသားပါတယ်။
အမေ့ကို အမြဲကျမ်းမာပျော်ရွှင်တာ မြင်ချင်ပါတယ်။ (အိုင်ပက်နဲ့ ဝေးချင်ဝေးပေါ့))))))))
Writer Sein Lyan Time 7:46 am
အမ အမေလည်း အရမ်းချူချာတယ်။
သူနေမကောင်းရင် အမလေ ဒီကနေပြေးသွားလိုက်ချင်တယ်။
ဖုန်းတွေဆက်လိုက် ငိုလိုက် အိပ်မပျော်နဲ့ ရင်တွေကို ပူနေရတယ်။
သူဟိုမှာ နေမကောင်းရင် အမဒီမှာ မျက်ခမ်းတွေလှုပ်ရောဘဲ။
အမေ ကို သိပ်ချစ်တဲ့ကိုဖိုးစိန် ကိလေးစားပါတယ်ဗျာ
10 July 2012 at 08:23
10 July 2012 at 11:15
10 July 2012 at 15:27
မိဘအပေါ်သိတက်တဲ့ကိုဖိုးစိန်ကို လေးစားပါတယ်ဗျာ။ ဘယ်လောက်စိတ်ပူရမယ်ဆိုတာလဲ ကိုယ်ချင်းစာပါတယ်။
တစ်ခုခုဆိုရင် အမေ့ကိုလျှော့ပြောပေးဖို့ ဆရာဝန်တွေကို ကြိုတောင်းပန်ထားပေါ့ဗျာ။
10 July 2012 at 19:10
တရွေ့ရွေ့ နဲ့ တချက်စီရွေ့လျှားနေတဲ့ နာရီစက်သံက အချက်မှန်ပေမယ့် ရင်ထဲက ရင်ခုန်သံက မူမမှန်ဘူး… တနာရီ မိုင်(၁၀၀) ဆိုတဲ့လေတိုက်နှုန်းနဲ့ အတူ စိတ...
ကျနော်တို့ မိသားစုမှာ အမေဘက် ကဆွေမျိုးတွေများတယ်… အမေအမျိုးတွေက တရုတ်စစ်စစ်တွေ… ဆွေကြီးမျိုးကြီးဆိုပြီး မာနက တစ်ထောင်ထောင်…. ဒါပေမယ့် ကျနော်...
၂၂.၇.၁၉၈၀ - ၂၂.၇.၂၀၀၉ ပထမဆုံး မှတ်တိုင် အမှတ်တရများ လောကကြီးမှာ ကျနော် အသက်ရှင်နေထိုင်ခွင့် ရခဲ့တဲ့ရက်ဟာ ဒီနေ့ဆိုရင် ရက်ပေါင်း(၁၀၃၃၀) ရှ...
အခုလာမယ့် စနေတနင်္ဂနွေဆိုရင် အလုပ်မလုပ်ပဲနားမယ်လို့ စိတ်ကူးထားတယ် ပူတာလဲပါတယ် ခြံရှင်းတဲ့အလုပ်လဲ မရှိလောက်သေးဘူး ဆိုတော့ ခွေတွေပြန်ကြည့်မယ်လို...